ကာတွန်း အောင်မော် – အဘတို့ကြရင် …. | MoeMaKa Burmese News & Media
Ku Mo Jo - Freedom to associate at day-club in Burma
အ ခွ င့် အရေး
ကာတွန်း အောင်မော် – အဘတို့ကြရင် ….
(မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၀၊ ၂၀၁၅